Balet, maxaa loo xidhayaa dirayska xafladda? - Warar - Warshad ku habboon dharka balastarka.
Hoyga > Wararka > Wararka warshadaha > Balet, maxaa loo xidhayaa dirayska xafladda?
Balet, maxaa loo xidhayaa dirayska xafladda?
Waxaan u maleynayaa in gabdhaha quruxda jecel ay tahay inay u maleeyaan in maalin uun ay sidoo kale gudbin karaan tuuga cad ee fiiqan, kabaha qoob-ka-ciyaarka ee whitesatin, oo isku xira madaxa kubadaha sare, waxay u muuqdaan kuwo si gaar ah u sharaf leh oo qurux badan! Istaagida masraxa waa sida Sprite oo ku taal sagxadda lugta, sii wad meeriska qoob-ka-ciyaarka qoob-ka-ciyaarka qalbigeygu ha jeclaado! Sidaa darteed, gabdho badan ayaa doorta inay bilaabaan wadada qoob-ka-ciyaarka baleedka! Markaa xulashada suud adiga kugu habboon ayaa kaa caawin kara horumarkaaga. Haddii aad xiiseyneyso inaad hagaajiso dabeecaddaada ama aad u fiirsato qaababka baleedka si aad ugu habboonaato, waa ugu yaraan ixtiraam naftaada, macallimiintaada iyo ardayda aad isku fasalka tihiin inay ka soo qayb galaan fasalka dharka habboon.
Maxay tahay inaad xirato dhar tababar ahï¼Ÿ
Ballet waa farshaxanka si buuxda u muujinaya quruxda khadadka jirka aadanaha. Isaga oo xidhaya mid si fiican u lebbisan, macallinka ayaa si cad u arki kara haddii dhaqdhaqaaqaagu meesha yaallo iyo isticmaalka muruqyada oo sax ah.
Ugu horreyntii, marka laga eego xagga aragtida aaminka ah, fasalka baleedka waa inuu xirtaa suudh jidh xirfad leh, oo aan ahayn suudh yoga ama suud sharciyeed.Shuruudaha aasaasiga ah ee dharka tababarka xirfadleydu waa kuwo adag, suuf saafi ah, nuugista dhididka, tababarka tababarka sidoo kale waa waaxda midabka iftiinka ugu fiican.Maxaad wax u weyddiinaysaa? Marka laga eego aragtida kinematic, xasaasiyadda jirka ee baleedka waa dhaqdhaqaaqa guud ee jirdhiska lama barbar dhigi karo, fur, boodbool, bale toos ah seddex arrimood, sidaa darteed jimicsiga baleedka waa inuu adkeeyaa dhinacyada jirka oo dhan, si muruqa muruqyada si joogto ah loo kala bixiyo.
Ciyaartoyga bilawga ah ee bilawga ah, gaar ahaan marka ay yaryari qaangaarka ahi, la xanuunsanayaan dhumucda halkii ay ka fidin lahaayeen fiilooyinka muruqyada haddii aysan ku dhaqmin dhaqdhaqaaqa caadiga ah oo ay muruqyadu si wanaagsan u shaqeeyaan. Inbadan halis ah, waxay sababi doonaan dhaawac jireed.Dharka jirka ee xirfadleyda ah ee loogu talagalay tababbarka balletku wuxuu awood u siinayaa macallimiinta inay si cad u arkaan khadadka iyo muruqyada jirka, oo ay ku hagaan oo ay ku saxaan waqtigooda. heerka dhibic, kuma saxnaan karo waqtigeeda, muddada-dheer ee aan caadiga ahayn waa cawaaqib xumo aad u daran
Halkan waxaan ku soo qaadaneynaa tusaale, "Shan" waa layli aasaasi ah oo baleedka ku yaal. Dhaqdhaqaaqa caadiga ah waa inuu suulasha iyo lugaha u leexiyo dhinacyada jirka. Labada lugood salka ayaa si siman ugu dheggan dhulka marka laga reebo gudaha qaansada. Qaar ka mid ah dadka bilowga ah cagaha ayey u jeesteen dhinacyadooda laakiin jilibyadu wali way socdaan lugihiina way qaloocsan yihiin oo isku soo urureen. jilibyadaada waqtiga. Waqtiga dheer, lugaha ma aha oo kaliya inay noqdaan kuwo qalloocan oo xanuun sameeya, laakiin sidoo kale waxay u horseedi doonaan dhaawacyada cagta iyo jilibka.
Marka labaad, marka laga eego dhinaca bilicsanaanta, ardaygu waa inuu sidoo kale xirtaa dharka jirka ee tababarka ballet-ka ee Mareykanka soo gala fasalka! Dharka baletiga iyo waxqabadka baleetku waxay ka tirsan yihiin farshaxanka muuqaalka, dharka baleedka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah farshaxanka baleedka, wuxuu ka ciyaaraa door aad muhiim u ah waxqabadka baleedka, baleetiga meelo kala duwan waa inay ku tiirsanaadaan warqadda dharka balletka, si loo gaaro saameyn farshaxanimo gaar ah. Sidaa darteed haddii aad xirato suudh qurux badan, waxaad si fiican ugu habboonaan kartaa jawiga baleedka. Way kuu fiican tahay inaad kobciso dareenkaaga edbinta, hagaajinta feejignaantaada, hagaajiso dabeecaddaada iyo aragtidaada, waxaadna dareemi doontaa sida qoob-ka-cayaaraha ballet-ka ah.Waxaan horey kuugu soo sheegnay inaadan waligaa diidi doonin inaad xirto suudh isku duuban sababtoo ah inaad ha haysan tirada agood. Suudhka jidhku wuxuu ka dhigi doonaa qaabka jidhka ee ay keento baleedka mid aad u sarreeya. Erey ahaan, labiska baleedka adag ayaa ka dhigi doona haweeney kasta mid isku kalsoon oo qurux badan!
Markaad dooranayso suunka baleedka:
1. Luqunta hore waa inaysan noqon mid aad u ballaaran, laakiin gadaalku waa inuu noqdaa mid furan oo si buuxda u soo bandhigi kara garbaha.
2. Waxaa fiican inaad gacmo la'aan noqotid iyo inaad awood u yeelatid inaad aragto kala-goysyada xusullada. Haddii gacmo-gacmeedyo la heli karo, ku wareeji xagasha xusulka.
3. Kudar gogo 'flounce si aad u qaadatid geesaha markii loo baahdo.
4. Dharka jidhku badanaa waa wax laastikada ka samaysan, carruurtuna way xidhan karaan haddii ay inyar sii koraan. Badiyaa dareenka garbaha ama miskaha waa "Wow!", Waxay ka dhigan tahay in carruurtu si dhakhso leh u koraan, oo loo beddelo dhar jidh weyn! Dadka qaangaarka ah, waxay ula jeedaan inaad miisaanka kordhayso mar kale.
Sidee loo xiraa dharka baleedka?
(1) Marka ugu horeysa ee lagugu xirto, xirmooyin isku dhow oo wax u dhimaya dameerka xirmada!
(2) Kadib xira sharabaadada, gacmaha xoogaa kor u kacaya, xoog haku jiidin oh!
(3) Midda xigta waa suudhka hal-jeex ah, ka dib marka la xidho baahida hubinta ee muraayada horteeda, si loo arko haddii ay jiraan wax laalaab ama calaamado adag.
Ps: Ha ku degdegin markaad xiraneyso dhar isku mid ah.hadii aad xajisid qoorta, kor u soo qaad. Garbaha iyo gacmaha kore aad ayey isugu xiran yihiin.
Sideen ku nadiifiyaa dharka qoob-ka-ciyaarka?
(1) Iyadoo 30â „ƒka hooseeya biyaha diirran, ku rid qaddarka ku habboon ee saabuunta saabuunta dhexdhexaadka ah, si fiican walaaq una walaaq
(2) gudaha iyo dibedda dharka midie leexdo, si buuxda u qoyso, oo leh
(3) habka loo riixo! Biyo diirran oo nadiif ah oo ka hooseeya 30â „ƒ, ku celi tallaabada, ka soo saar xumbada
(4) Joogso gudaha iyo dibaddaba markay xaaladdu u rogeyso, hooska hawada dabiiciga ah ee qalalan!
Hore:Waa maxay dharka ballet tutu?
Xiga:Maxay qoob ka ciyaarka baleydu ugu istaagaan cagaha?